Niova ho fifaliana ny fahoriana!
Isaia 51:17- 52:12 "Mifohaza, mifohaza, mitsangana, ry Jerosalema ô, izay efa nisotro ny kapoaky ny fahatezerana avy tamin’ ny tànan’ i Jehovah; eny, ny kapoaka gobilia mampiraikiraiky dia efa nisotroanao, ka notrohinao mbamin’ ny faikany.... Fa tsy tampoka no hivoahanareo, ary tsy lositra no handehananareo; fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Isiraely no ho vodi-lalanareo."
Mafy dia mafy ny famaizana nahazo ny zanak’Israely noho ny fiodinany tamin’Andriamanitra. Lalina dia lalina koa anefa ny fitiavan’Andriamanitra azy ka hamonjy azy Izy. Mifohaza, mitsangana! Tao anatin’ny fahoriana mafy nanjo azy dia tsy nahatraka nijery ny Tompo intsony ny vahoaka. Tonga anefa ny fanarenan’ny Tompo ka baiko no omeny mba hialana amin’izay fahakiviana sy famoizam-po izay. Ny sarin- teny ataon’Isaia entina hilazana ny zava-manjo ny Israely eto (20-21) dia mampiseho fa tena reraka ary tsy manana fanantenana intsony ry zareo. Fahoriana tsy roa aman-tany ny iharan’ny fahatezeran’ny Tompo saingy lehibe lavitra noho izany no hanarenany azy noho ny fitiavany. Mety miaina ao anaty ady sy fahoriana ianao noho ny zavatra nataonao saingy aza milofika fa mitrakà fa mbola mitsotra ny tanam-pamonjena te hamela heloka ka hanangana anao indray. Tia anao foana ny Tompo. Ho fantany ny Anarako! Tao anatin’izany dia tanjona iray ihany no tian’ny Tompo hotratrarina. Rehefa mahafantatra ny anaran’ny Tompo tokoa mantsy ny olona dia hitandrina ny lalan-kalehany ka hanao ny sitrapon’ny Tompo hatramin’ny madinika indrindra. Endrey izany fitiavan’ny Tompo (6). Na maditra aza ny zanak’olombelona dia mbola manao dingana foana Izy mba hamonjena azy tsy ho very mandrakizay. Tonga ny Vaovao Mahafaly! Iza no tsy ho faly mahare vaovao tsara sy mahafinaritra? Ny ranomaso ho lasa hikam-pifaliana. Tsy zakan’Andriamanitra mihitsy ny mijery ny fahorian’ny zanak’olombelona manolotra ny vahaolana mba hanalana azy ao anatin’izany Izy.
Nahoana anefa no mbola toy izao ny zava-misy? Tsy mandray ilay Vaovao Mahafaly ny olona fa mitady vahaolana amin’ny sainy sy heriny foana. Mampalahelo!…